Taba-bar lagu baranayo horumarinta Nabadda iyo Cadaaladda oo maamulka Banaadir u furay qeybaha bulshada degmada Kaaraan (sawirro) | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Taba-bar lagu baranayo horumarinta Nabadda iyo Cadaaladda oo maamulka Banaadir u furay...
Taba-bar lagu baranayo horumarinta Nabadda iyo Cadaaladda oo maamulka Banaadir u furay qeybaha bulshada degmada Kaaraan (sawirro)
Taba-barrkan ayaa waxaa oo lagu baranayaa horumarinta Nabadda iyo Cadaaladda ayaa axaa loo qabtay qaar ka mid ah Saraakiisha Booliska, Haweenka, Dhalinyaradda, Odayaasha, iyo Culumadda degmada Kaaraan.
Guddoomiye Ku Xigeenka 1aad ee Amniga iyo Siyaasadda Maamulka Gobolka Banadir Mudane Maxammed Cabdullaahi Maxammed (Tuulax) ayaa sheegay in dadka tabarka loo sameeynayo eey qaadan doonaan Casharo iyo Wacyigelin ku saabsan horumarinta, Iskaashiga Nabadda iyo Cadaaladda Caasimadda.
Guddoomiye tuulax ayaa sheegay in Tabarkan la gaarsiin doono dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana u jeedada uu ku sheegay in eey tahay sidii umadda oo dhan loo siin lahaa wacyi gelin ku filan gaar ahaan bulshada ku dhaqan Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Previous articleDabaal-degga sanad guurada 1-aad ee Madaxweyne Farmaajo oo yeelatay wiji ka duwan dabaal-degyadii hore (sawirro).
Next articleEng, Yariisow oo Ka qeyb galay Xafladda dib u howl-galinta Dugsiga Sare ee 15 May (Sawirro).